कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान जुम्लाबाट उपचार गर्न भेरी अस्पताल जाँदै चिकित्सक | raynewsdaily.com
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान जुम्लाबाट उपचार गर्न भेरी अस्पताल जाँदै चिकित्सक
Sunday, May 2nd, 2021, 8:37 am
प्रतिष्ठानका एनेस्थेसिया तथा सघन उपचार विभाग प्रमुख डा. प्रवीण गिरी नेतृत्वको चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको टोली नेपालगञ्ज जाने लागेको प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार विश्वराज काफ्लेले बताउनुभयो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आग्रहपछि प्रतिष्ठानका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको टोली भेरी अस्पतालमा खटाइन लागिएको हो । “सघन उपचारका लागि चिकित्सकको अभाव रहेको जानकारी भेरी अस्पतालका मेसु डा. प्रकाश थापाले गराउनुभएको थियो”, प्रतिष्ठानका निमित्त निर्देशक डा. राजिव शाहले भन्नुभयो, “त्यहीअनुसार सघन उपचार विभागकै इन्चार्ज गिरीको नेतृत्वमा टोली पठाउने निर्णय गरिएको हो ।”
प्रमुख गिरीसहित डा. अरुण श्रेष्ठ, डा. हरि न्यौपाने, नर्सहरु सुष्मिता खड्का, तेन्जिङ लामा र प्यारामेडिक्स नरेन्द्र शर्मा भेरी अस्पतालमा जान लाग्नुभएको हो । “मौसमले साथ दिए र उडान भए आजै नेपालगञ्ज जाने तयारी गरिएको छ । “करिब १० देखि १४ दिनसम्म भेरीमा बसेर हामीले बिरामीको उपचार र व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नेछौँ”, डा. गिरीले भन्नुभयो ।
नेपाल सरकारले कोरोनाको उपचार र व्यवस्थापनका लागि अस्पतालमा टोली बनाएको छ । उक्त टोलीले जहाँ अप्ठ्यारो पर्छ त्यहाँ पुगेर सहयोग गर्नेछ । यो टोली निश्चित समयका लागि परिचालन हुनेछ ।
भेरी अस्पतालमा जनशक्तिको अभाव हुँदा उपचार व्यवस्थापनमा गाह्रो परेको भन्दै आफ्नो नेतृत्वको टीमले त्यसमा सहयोग र सहजीकरण गर्ने डा. गिरीले बताउनुभयो ।